Goodax ayaa ka hadlay sababta arday badan oo wax ka barta gobolka Banaadir u dhaceen… – Hagaag.com
Goodax ayaa ka hadlay sababta arday badan oo wax ka barta gobolka Banaadir u dhaceen…
Posted on 8 Seteembar 2020 by Admin in National // 0 Comments
Wasiirka Waxbarashada Dowlada Federalka Cabdulaahi Goodax Barre ayaa ka hadlay sababaha keenay in kumanaan arday ah oo wax ka barta gobolka Banaadir inay ku dhacaan imtixaanka kama dambaysta ah ee dugsiyada sare.
Cabdulaahi Goodax Barre oo wareysi siiyay idaacada BBC-da laanta afka Soomaaliga ayaa sheegay in ay jiraan sababo u gaar ah ardayda caasimada, taas oo keentay in imtixaanka ay arday badan ku dhacaan.
Wasiirka ayaa sababaha keentay inay natiijo aan wanaagsanayn ardayda Muqdisho ay keenaan ay ka mid tahay in iskoolada gaarka loo leeyahay ay ardayda boobsiiyaan, taas oo keentay in wax ka qaldamaan tayada waxbarasho ee ardayda.
Sidoo kale wasiirka ayaa sheegay in aysan ardayda Muqdisho haysan macalimiin wanaagsan sidoo kalana uu saameyn ku yeeshay cudurka Coronavirus oo muddo saddex bilood ah ardaydu wax baran.
Si kasta ha ahaatee SiihayahaWasiirka Waxbarashada Goodax ayaa difaacay eedeymo loo soo jeediyay wasaarada sida ay imtixaanka u saxday waxana uu sheegay in qorshe ballaaran ay u sameeyeen sixitaanka imtixaanka.
Eedeymo badan ayaa loo soo jeediyay Wasaarada Waxbarashada natiijada imtixaanka sanad dugsiyeedkan iyadoo inkabadan toddobo kun oo arday ah ay imtixaanka ku dhaceen.